नयाँ प्रहरी ऐन : सेवाहदबारे प्रहरीभित्रै विवाद - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७६ वैशाख २ गते ७:४२
काठमाडौं, २ वैशाख । नयाँ प्रहरी ऐन बन्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि नेपाल प्रहरीमा सेवाहदबारे विवाद चर्किएको छ ।
केही प्रहरी अहिलेको ३० वर्षे सेवाहद कायमै राख्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्काथरी हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । दुईथरी लबिङका कारण गृह मन्त्रालयका अधिकारी नै अन्योलमा परेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आइसकेको नयाँ ऐनको मस्यौदामा ३० वर्षे सेवाहद कायमै राखिएको छ । यद्यपि, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ यो व्यवस्था हटाउने पक्षमा छन् ।
उनले सार्वजनिक रूपमै ३० वर्षे सेवाहदले प्रहरी संगठनलाई असर गरेकाले हटाइने बताइसकेका छन् । अहिले नै त्यसबारे मस्यौदामा राख्दा विवाद हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने तयारी छ ।
निजामती सेवामा उमेर र पदावधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने प्रावधान छ । तर, नेपाल प्रहरीमा भने उमेर, पदावधिका साथै सेवाहदका कारण पनि अवकाश पाउने व्यवस्था छ । भर्ना भएको ३० वर्ष सेवा पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुन्छ । यो प्रावधानले आफूहरूलाई अन्याय भएको प्रहरीको गुनासो छ ।
अहिले प्रहरी संगठन संघीय संरचनामा जाँदा पनि सेवाहद हटाउन नसके कहिल्यै हटाउन नसकिने कतिपय प्रहरी अधिकृतहरूको भनाइ छ ।
‘यसबाट राज्यलाई पनि करोडौँ फाइदा हुन्छ, संगठन पनि थप बलियो हुन्छ,’ एक प्रहरी अधिकृत भन्छन् । सक्रिय उमेरमै सेवाहदका कारण अवकाश दिँदा संगठनले तालिमप्राप्त जनशक्ति गुमाउने र अर्काेतर्फ पेन्सनभारसमेत बढ्ने उनको भनाइ छ ।
मेयर ध्रुव सिवाकोटीले बाध्य भएर भनेँ, ‘सरकारी क्षतिपूर्ति लिन्नँ’
सैनिकले गुमाए साढे चार लाख, ठगिइसकेपछि मात्रै युवती आफ्नै गाउँकी भएको खुलासा
कुर्सीकाे संकट टाल्न ओलीका तीन विकल्प, यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीका अप्ठ्यारा
कृषकको पैसा कर्मचारीको खल्तीमा
सबैतिर चिप्लिए गृहमन्त्री थापा : माखो मार्न सकेनन् !
कांग्रेसभित्र हंशराजका दिनगन्ती शुरू, ‘अन्तर्घाती’ तामाङको प्रमाण सानेपा पुग्यो
‘भर्जिन’ नेपाली युवती खोज्दै काठमाडौं आइपुगे भारतीय व्यापारी, डुब्यो २३ लाख
सरकार र नेकपाविरुद्ध कांग्रेसले चलाएको ‘ज्वाँई’ हल्ला
समुदाय-प्रहरी साझेदारी प्रभाव : मामाबाट बलात्कृत बालिकाले मुख खोलिन्
व्यवस्थै उल्टाउने खेल ! प्रधानमन्त्री ओलीका विदेश विज्ञले गरे यस्तो संकेत
विप्लव समूहको समर्थनमा निरन्तर रेखा थापा, फेरि यसो भनिन्
साइप्रस शृङ्खलाबद्ध हत्या: नेपाली महिलासहित सात जनाको हत्या गर्ने पूर्वसैनिकलाई ‘सातवटा जन्मकैद’
युवतीको काइदा : विवाह गर्ने बहानामा लाखाैँ रुपैयाँ झ्वाम, नक्कली फेसबुकको शिकार बने हरिबहादुर
चीन फुटाउने अभियानमा सत्तारुढ दलकै नेता सक्रिय
कांग्रेसका सभापतिले ७७ जिल्लाका केन्द्रीय प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गर्ने
अछाममा ट्याक्टर दुर्घटना, तीन जना विद्यार्थीको मृत्य
सल्यानकाे कुपिण्डे तालमा तीन दिनदेखि गाेकुल बुढा बेपत्ता
नेदरल्याण्ड्स फिफा महिला विश्वकपको क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश
विश्वकप क्रिकेटमा अष्ट्रेलियालाई छैटौं जित, शीर्ष स्थानमा उक्लिएयाे
अमेरिकामा नेपाली युवती कन्चन अमात्य पुरस्कृत